Abase-Ashdown bazomela izikole zaseMgungundlovu ebholeni | News24
LAST UPDATED: 2018-11-16, 06:17
Abase-Ashdown bazomela izikole zaseMgungundlovu ebholeni
ABADLALI abayisikhombisa (seven) abadlala ngaphansi kweqembu lebhola lezinyawo labantu besifazane i-Ashdown Sports Academy baqokwe njengabanye babadlali abazomela izikole zesiFunda uMgungundlovu emdlalweni wezikole kwisifundazwe saKwaZulu-Natal.
Lemidlalo izobe ibanjelwe eThekwini kusukela mhla zingama-22 kuya mhla zingama-22 kuNhlangulana (June)
U-Anako Dladla (13), Luyanda Sibiya (14), Andiswa Ndlovu (14), Slindile Ndlovu (15), Aphiwe Hadebe (16), Sphe Ngubane (16) kanye noSbahle Makhanya (14) bangabanye babadlali abali-12 abaqokiwe kubadlali ba-Under 17 abazomela uMgugundlovu kanti baphuma ezikoleni okubalwa kuzona KwaPata Secondary, Edendale Technical High School kanye neSiyahlomula Secondary.
Ngokusho komqeqeshi walaba badlali uMnu Londa Mnikathi uthe laba badlali baqokwe ngesonto eledlule emdlalweni yokuhlungela abadlali abazomele izikole zaseMgungundlovu ebibanjelwe eNorthdale Stadium.
Ekhuluma ne-Echo uMnikathi uthe ujabule kakhulu ukuthi abadlali bakhe bangabanye abaqokiwe ukuthi bayomela izikole zesiFunda zaseMgungundlovu.
“Lokhu kuyakhombisa ukuthi benza kahle kakhulu uma bengena enkundleni kanti kuyakhombisa ukuthi siyawenza nathi umsebenzi ukubaqeqesha. Siyajabula kakhulu ukuthi izingane zethu nazo zikwazi ukuthola amathuba amahle kangaka ngethalente lazo.
Ngithanda ukubonga kakhulu nje uMnu Sihle Basi nokunguyena ongeseka kakhulu ngalezi zigane kanjalo nabazali nabo asebekhombise ukungeseka okukhulu kanye nokungethemba ngezingane zabo,” kubeka yena.
UMnu Mnikathi uphinde wancoma abadlali bakhe ngokuzimisela kwabo esho nokuthi uma bengaqhubeka ngendlela abenza ngayo bazoya kude ebholeni lezinyawo.
UMnu Sihle Basi nokunguyena obhekelele ezebhola lezinyawo lamantombazane eMgungundlovu uthe lokhu okwenzeke kwi-Ashdown Sports Academy kuyajabulisa kakhulu.
“Kuyinto enkulu lena eyenzekile. Lezi zingane zidalelwe ukuphumelela vele siyajabula ukuthi bakwazile ukutonyulwa. Ngithanda nokuncoma uMnu Mnikathi ngomsebenzi wakhe awenzayo njengoba aqala ukuqeqesha lezi zingane esemncane naye,” kubeka yena.
Laba badlali abasebancane uma beqokiwe eThekwini bazobe sebemela isifundazwe saKwaZulu-Natal.
Kwenzeka konke loku nje abadlali ababili baleli qembu u-Oluhle Mduna kanye noLuyanda Sibiya basanda kubuya e-Japan nalapho ekade bemele khona izwe lakuleli emncintiswaneni i-One Nation Cup.
Cradle of conflict: A landless community divided in a landowner's paradise
Paarden Eiland 06:11 AM